Isekela ifektri, abahlinzeki - iChina isekela abenzi
Ukusekelwa kwe-HDG Cast Iron Single Pipe Roller Support
Njengenye yeziphanyeko ezincintisana kakhulu zenkampani, izesekeli zethu ze-HDG cast iron single pipe roller zenzelwe ukumisa ipayipi lapho kudingeka khona ukuhamba isikhathi eside nokulungiswa okuqondile. Futhi bathole ukuthandwa okukhulu emhlabeni jikelele, ikakhulukazi eNyakatho Melika, eNingizimu Melika, eMpumalanga Ephakathi nase-Asia. Futhi, kukhona izindlela zokwelapha ezihlukile ongakhetha kuzo: I-Plain, i-Hot bacwilisa lashukumisa, i-epoxy no-Green galvanized kumaliza, ukuhlangabezana nezidingo zakho zokulwa nokugqwala kwamazinga ahlukene.
I-HDG Cast Iron Pipe Roller Stand
Njengenye yeziphanyeko ezincintisana kakhulu zenkampani, izitendi zethu ze-HDG cast iron roller zenzelwe ukumisa amapayipi lapho kudingeka khona ukuhamba isikhathi eside nokulungiswa okuqondile. Futhi bathole ukuthandwa okukhulu emhlabeni jikelele, ikakhulukazi eNyakatho Melika, eNingizimu Melika, eMpumalanga Ephakathi nase-Asia. Futhi, kukhona izindlela zokwelapha ezihlukile ongakhetha kuzo: I-Plain, i-Hot bacwilisa lashukumisa, i-epoxy no-Green galvanized kumaliza, ukuhlangabezana nezidingo zakho zokulwa nokugqwala kwamazinga ahlukene.
Ukulayisha okuphezulu okuphethe iRubber Support Insert
Njengenye yeziphanyeko zokuncintisana kakhulu zenkampani, ukufakwa kwethu okuphezulu okuphethe ukusekelwa kwenjoloba kuyasetshenziswa ezindaweni ezisekelayo zamapayipi afakwe imigoqo ukuvimbela ukuchobozwa kokufakwa. Futhi bathole ukuthandwa okukhulu emhlabeni jikelele, ikakhulukazi eMiddle East nase-Asia. Futhi, ubukhulu be-13mm, 19mm, 25mm, no-50mm buyatholakala.
Izinto Zokuvikela Ukuvikela Isihlangu
Njengenye yeziphanyeko ezincintisana kakhulu zenkampani, izivikelo zethu zokuvikela ukwahlukanisa zisetshenziswa phakathi kwendawo yesiphanyeko namapayipi afakwe imigoqo ukuvimbela ukuchobozwa kokufakwa. Futhi bathole ukuthandwa okukhulu emhlabeni jikelele, ikakhulukazi eNyakatho Melika.
I-HDG Adjustable Cast Iron Roller Hanger
Njengenye yeziphanyeko ezincintisana kakhulu zenkampani, iziphanyeko zethu ze-HDG eziguquguqukayo zensimbi zenzelwe ukumisa amapayipi lapho kudingeka khona ukuhamba isikhathi eside nokulungiswa okuqondile. Futhi bathole ukuthandwa okukhulu emhlabeni jikelele, ikakhulukazi eNyakatho Melika, eNingizimu Melika, eMpumalanga Ephakathi nase-Asia. Futhi, kukhona izindlela zokwelapha ezihlukile ongakhetha kuzo: Zinc-plated, Hot bacwilisa lashukumisa, epoxy futhi Green lashukumisa sekugcineni, ukuhlangabezana nezidingo zakho ezahlukene anticorrosion.
Isihlalo se-HDG Cast Iron Pipe Roller
Njengezinye iziphanyeko ezincintisana kakhulu zenkampani, izihlalo zethu ze-HDG cast iron roller chair zenzelwe ukumisa amapayipi lapho kudingeka khona ukuhamba isikhathi eside nokulungiswa okuqondile. Futhi bathole ukuthandwa okukhulu emhlabeni jikelele, ikakhulukazi eNyakatho Melika, eNingizimu Melika, eMpumalanga Ephakathi nase-Asia. Futhi, kukhona izindlela zokwelapha ezihlukile ongakhetha kuzo: Zinc-plated, Hot bacwilisa lashukumisa, epoxy futhi Green lashukumisa sekugcineni, ukuhlangabezana nezidingo zakho ezahlukene anticorrosion.